ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုရွေးချယ်ထားသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ လူနေမှုပုံစံ၊ အလုပ်နှင့်ဘဏ္Financialာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်များအရ (2017) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
, Selected အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေး, ဘာသာတရားနှင့်နိုင်ငံရေးအချက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအကဲဆတ်သောလိင်ရုပ်ရှင် (2017)
Frutos, AM & Merrill, RM
လိင် & ယဉ်ကျေးမှု (2017) ။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြားဆက်ဆံရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အလုပ်, ငွေကြေး, ဘာသာရေး, နိုင်ငံရေးအချက်များအရသိရသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒေသစစ်တမ်းများနှင့် 11,372 မှ 2000 ထံမှအထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (GSS) တွင်အတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားသူကိုပါဝင်ပတ်သက် 2014 လူကြီးများလေ့လာဆန်းစစ်။ ယခင်နှစ်ကတစ်ဦးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင် viewing (35% vs. 16) အမျိုးသမီးတွေထက်အမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာကြီး; အဖြူထက်လူမည်း (33% vs. 22); နှင့် (41% ကွဲကွာနှင့် 18% ကွာရှင်း 31% vs. 24 လက်ထပ်) လက်ထပ်ဘူး။ ဒါဟာအစအဟောင်းတွေအသက်, အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အိမ်သူအိမ်သားတွင်ပိုမိုကလေးတွေနဲ့အတူလျော့နည်းသွားသည်။
ဤအ variable တွေကိုများအတွက်မော်ဒယ်ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးအရေအတွက်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ဘဏ္ဍာရေး, ဘာသာရေး, နိုင်ငံရေးနှင့်အခြား variable တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်ကာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုအိမ်ထောင်မှာလျော့နည်းပျော်ရွှင်မှုကို, အတိတ်နှစျတှငျမျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်တပါးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကိုမျှဘာသာရေး preference ကို, တစ်ဦးထက်ပိုသောလစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးမတိမ်းညွတ်နှင့်အတူလျော့နည်းစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပေါ်အချို့သော variable တွေကိုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကွဲပြားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မိမိတို့ကိုယ်ကို "ဝိညာဏအမရ" ဖွစျထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးထဲကယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန် ပို. ခဲ့ကြသည်။ အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, ပိုပြီးလစ်ဘရယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်အလေ့အကျင့်, ဆင်းရဲတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေများ, နိမ့်ဘာသာရေးတိမ်းညွတ်သို့မဟုတ်ကတိကဝတ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. လစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးအမြင်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနား domains များထံမှအချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
keywords Erotica / pornography စုံတွဲများ / အိမ်ထောင်ရေး / ချစ်ခြင်းကျား / မခြားနားချက်အရေအတွက် / စာရင်းအင်း / စစ်တမ်းဘာသာရေး GSS
မစ္စအောလ်ဘရိုက်, ဂျေ (2008) ။ အွန်လိုင်း America မှာလိင်: အင်တာနက်လိင်ရှာနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုရှိလိင်၏တူးဖော်ရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 45(2), 175-186 ။ Doi:10.1080 / 00224490801987481.CrossRefGoogle Scholar
Allen, အမ်, Emmers, တီ, Gebhardt, အယ်လ်, & Giery, MA (1995) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္thာရီကိုလက်ခံခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 45(1), 5-26 ။CrossRefGoogle Scholar
Allen က, K. , & Lavender-Stott, အီး (2015) ။ အလွတ်သဘောလိင်ပညာရေး၏မိသားစုအခြေအနေများ - ပထမလိင်မှုပုံရိပ်များကိုလူငယ်များ၏သဘောထား။ မိသားစုဆက်ဆံရေး, 64(3), 393-406 ။ Doi:10.1111 / fare.12128.CrossRefGoogle Scholar
Angres, DH, & Bettinardi-Angres, K. (2008) ။ စွဲရောဂါ၏ရောဂါ - မူလအစ၊ ကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ရောဂါ-a-လ, 54, 696-721 ။CrossRefGoogle Scholar
Baumeister, RF, Catanese, KR, & Vohs, KD (2001) ။ လိင်မှုကိစ္စအားကျားမကွဲပြားမှုရှိပါသလား။ သီအိုရီအမြင်များ, အယူအဆရေးရာဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 5(3), 242-273 ။CrossRefGoogle Scholar
Beauregard, အီး, Lussier, P. , & Proulx, ဂျေ (2004) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောမုဒိမ်းကျင့်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း။ သုတေသနနှင့်ကုသရေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုတစ်ဦးကဂျာနယ်, 16(2), 151-161 ။ Doi:10.1023 / b: sebu.0000023063.94781.bd.Google Scholar
Berridge, KC, & ရော်ဘင်ဆင်, TE (2002) ။ တစ် ဦး စွဲ ဦး နှောက်၏စိတ်: လိုသောနှိုင်းယှဉ်လိုသော၏အာရုံကြော sensitization ။ JT Cacioppo, GG Bernston, R. Adolphs, et al ။ (Eds ။ ), လူမှုအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် (စစ။ 565-572) ။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကနှိပ်ပါ။Google Scholar
Boeringer, SB (1994) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: မုဒိမ်းမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု proclivity နှင့်အတူအကြမ်းဖက်များနှင့်အကြမ်းမဖက်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏အသင်း။ Deviant အပြုအမူ, 15(3), 289-304 ။CrossRefGoogle Scholar
Bridges, AJ, & Morokoff, PJ (2010) ။ လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ကွဲစုံတွဲများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Relationships, 18(4), 562-585 ။ Doi:10.1111 / j.1475-6811.2010.01328.x.CrossRefGoogle Scholar
ဘန်း, RJ (2002) ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ရိုးရာအမျိုးသမီးကျားမအခန်းကဏ္ဍ၏ထောက်ခံချက်၏အထီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးသူ '' အမြင် (စ။ 11) ။ Austin, Texas ပြည်နယ်: ဆက်သွယ်ရေးလေ့လာရေး, တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန။Google Scholar
Buzzell, တီ (2005) ။ သုံးနည်းပညာအခင်းအကျင်းအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, 9(1), 28-48 ။ Doi:10.1007 / bf02908761.CrossRefGoogle Scholar
Coleman, အီး, Horvath, K. , မိုင်းလုပ်သား, အမ်, ရော့စ်, အမ်, Oakes, အမ်, & Rosser, ခ (2009) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာလိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39(5), 1045-1053 ။ Doi:10.1007/s10508-009-9507-5.CrossRefGoogle Scholar
Dew, ခ, Brubaker, အမ်, & Hays, D. (2006) ။ ယဇ်ပလ္လင်မှသည်အင်တာနက်သို့ - အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားများနှင့်သူတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 13(2-3), 195-207 ။ Doi:10.1080 / 10720160600870752.CrossRefGoogle Scholar
Doran, K. , & စျေး, ဂျေ (2014) ။ အပြာစာပေနှင့်အိမ်ထောင်ရေး။ မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများ၏ဂျာနယ်, 35(4), 489-498 ။ Doi:10.1007/s10834-014-9391-6.CrossRefGoogle Scholar
Durrant, ဂျေ, & Ensom, R. (2012) ။ ကလေးများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း - အနှစ် ၂၀ ကြာသုတေသနမှသင်ခန်းစာများ။ ကနေဒါ Medical Association Journal မှ, 184(12), 1373-1377 ။CrossRefGoogle Scholar
Evert, ဂျေ (2016) ။ ညစ်ညမ်း။ Catholiceducation.org ။ ကနေ 1 စက်တင်ဘာလ 2016 ရယူရန် http://www.catholiceducation.org/en/marriage-and-family/parenting/pornography.html.
Fisher က, ဒဗလျူ, Kohut, တီ, Di Gioacchino, အယ်လ်, & Fedoroff, P. (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့် paraphilia ။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုအစီရင်ခံစာများ။ Doi:10.1007/s11920-013-0362-7.Google Scholar
Flisher, C. (2010) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် in: ပလပ်တဲ့။ Paediatrics နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 46, 557-559 ။CrossRefGoogle Scholar
Foubert, ဂျေ, & Bridges, အေ (2015) ။ ဆွဲဆောင်မှုကဘာလဲ? ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ကြည့်ရှုသူအား ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရည်ရွယ်ချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်။ Doi:10.1177 / 0886260515596538.Google Scholar
Georgiadis, JR (2006) ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသမီး clitorally သွေးဆောင်အော်ဂဇင်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်, 24(11), 3305-3316 ။CrossRefGoogle Scholar
GSS အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (2016) ။ မှရယူရန် http://gss.norc.org/.
Harper, C. , & Hodgins, ((2016) ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5(2), 179-191 ။ Doi:10.1556 / 2006.5.2016.022.CrossRefGoogle Scholar
ဟီလ်တန်, DL (2013) ။ neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားညစ်ညမ်းစွဲ-တစ်ဦးက supranormal နှိုးဆွ။ လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ၊ 3, 20767 ။ Doi:10.3402 / snp.v3i0.20767.CrossRefGoogle Scholar
Hudson ဂျူနီယာ, D. (2002) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာနှင့်ညစ်ညမ်းမှု ပထမပြင်ဆင်ချက်စင်တာ - သတင်း၊ ဝေဖန်ချက်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စာနယ်ဇင်း၊ ဘာသာရေး၊ ပထမ ဦး ဆုံး။ 1 စက်တင်ဘာလ 2016 ရယူရန် http://www.firstamendmentcenter.org/pornography-obscenity.
Kafka, အမတ် (2000) ။ အဆိုပါ paraphilia-related ရောဂါများ: Nonparaphilic hypersexuality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity / စွဲ။ SR Leiblum & RC ရို (Eds ။ ) ၌တည်၏, အခြေခံမူများနှင့်လိင်ကုထုံး၏အလေ့အကျင့် (3rd ed ။ , စစ။ 471-503) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။Google Scholar
ကင်မ်, အက်စ်, & Lee က, C တို့ (2015) ။ တောင်ကိုရီးယားအထက်တန်းကျောင်းသားများတွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုထိခိုက်စေသည့်အချက်များ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသူနာပြု, 33(3), 179-188 ။ Doi:10.1111 / phn.12211.CrossRefGoogle Scholar
Kingston, D. , Fedoroff, P. , Firestone, P. , ဟင်း, အက်စ်, & ဘရက်ဖို့ဒ, ဂျေ (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - လိင်မှုကျူးလွန်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အမျိုးအစား ရန်လိုမူအကျင့်, 34(4), 341-351 ။ Doi:10.1002 / ab.20250.CrossRefGoogle Scholar
Kraus, အက်စ်, Martino, အက်စ်, & Potenza, အမ် (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5(2), 169-178 ။ Doi:10.1556 / 2006.5.2016.036.CrossRefGoogle Scholar
လမ်းဘတ်, N. , Negash, အက်စ်, Stillman, တီ, Olmstead, အက်စ်, & Fincham, အက်ဖ် (2012) ။ ကြာရှည်မခံသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးခြင်းနှင့်မိမိ၏အချစ်ဆုံးအဖော်အားကတိကဝတ်ပြုခြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 31(4), 410-438 ။ Doi:10.1521 / jscp.2012.31.4.410.CrossRefGoogle Scholar
Layden, MA (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အကြမ်းဖက်မှု - သုတေသနအသစ်တစ်ခု။ ဂျေ Stoner & Hug Hughes (Eds ။ ) ၌တည်၏, ညစ်ညမ်း၏လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်: စာတမ်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု (စစ။ 57-68) ။ Princeton, NJ: Witherspoon Institute မှ။Google Scholar
MacInnis, C, & Hodson, G. အ (၂၀၁၄) ။ ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ရှေးရိုးစွဲလူ ဦး ရေများသောအမေရိကန်များသည်ဂူဂဲလ်မှလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုရှာဖွေပါသလား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44(1), 137-147 ။ Doi:10.1007/s10508-014-0361-8.CrossRefGoogle Scholar
Maddox, အေ, Rhoades, G. အ, & Markman, အိပ်ချ် (2009) ။ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင် - ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40(2), 441-448 ။ Doi:10.1007/s10508-009-9585-4.CrossRefGoogle Scholar
Malamuth, N. , Addison, T. , & Koss, အမ် (2012) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား၊ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသလား။ လိင်သုတေသနနှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 11(1), 26-91 ။Google Scholar
Mesch, G. အ (2009) ။ လူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 32(3), 601-618 ။ Doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004.CrossRefGoogle Scholar
ပေါလုက, P. (2007) ။ Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ငါတို့မိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲနေသည် (စစ။ 155-156) ။ နယူးယောက်, NY: ဟင်နရီ Hold နှင့် Co. ,Google Scholar
ရှင်ပေါလု, P. (2010) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများမှအပြာရုပ်ပုံများအထိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမည်သို့ဖြစ်လာသည်။ ဂျေ Stoner & Hug Hughes (Eds ။ ) ၌တည်၏, ညစ်ညမ်း၏လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်: စာတမ်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု (စစ။ 3-20) ။ Princeton, NJ: Witherspoon Institute မှ။Google Scholar
ပယ်ရီ, အက်စ် (2016a) ။ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကိုလျှော့ချပါသလား? longitudinal ဒေတာကနေသက်သေအထောက်အထား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ Doi:10.1007 / s10508-016-0770-y က.Google Scholar
ပယ်ရီ, အက်စ် (2016b) ။ မကောင်းတဲ့အနေဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားသလော ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ဇနီးယောင်္ကျားစျယာနျဘာသာတရားကို, ကျား, မ, နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို။ လူမှုဗေဒဖိုရမ်, 31(2), 441-464 ။ Doi:10.1111 / socf.12252.CrossRefGoogle Scholar
Poulsen, FO, Busby, DM, & Galovan, AM (၂၀၁၃) ။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှု။ ၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲ၏ရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, 50(1), 72-83 ။CrossRefGoogle Scholar
Rasmussen, K. , & Bierman, Alex (2016) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ဘာသာရေးတက်ရောက်မှုသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမည်သို့ပုံဖော်သနည်း။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 49, 191-203 ။ Doi:10.1016 / j.adolescence.2016.03.017.CrossRefGoogle Scholar
Regan, PC, & Atkins, L. (2006) ။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင်ဆန္ဒ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုတူညီသည်။ လူမှုအပြုအမူနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 34(1), 95-101 ။CrossRefGoogle Scholar
Romito, P. , & Beltramini, အယ်လ် (2011) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်း။ ကျား၊ မကွဲပြားမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်ခံရမှု။ အီတလီမှာရှိတဲ့ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ, 17(10), 1313-1326 ။ Doi:10.1177 / 1077801211424555.CrossRefGoogle Scholar
Ross, MW, Mansson, SA, & Daneback, K. (2014) ။ ဆွီဒင်အမျိုးသားနှင့်မိန်းမများတွင်ပြproblemနာရှိသောလိင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့မှု၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 41(2), 459-466 ။CrossRefGoogle Scholar
Rothman, အီး, & Adhia, အေ (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်၊ မြို့ပြတွင်နေထိုင်သော၊ အမူအကျင့်သိပ္ပံ, 6(1), 1-11 ။ Doi:10.3390 / bs6010001.CrossRefGoogle Scholar
Sherkat, DE, & Ellison, CG (1997) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစစ်ပွဲ၏သိမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ - ကွန်ဆာဗေးတစ်ပရိုတက်စတင့်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုဆန့်ကျင်ခြင်း။ လူမှုတပ်ဖွဲ့များ, 75(3), 957-982 ။CrossRefGoogle Scholar
ငွေ, အေ (2010) ။ အဘယ်အရာကိုကမျြးစာကိုလိင်အကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ အချိန်. http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,2027582,00.html.
Stack, အက်စ်, Wasserman, ဗြဲ, & Kern, R. (2004) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးနှောင်ကြိုးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း။ လူမှုရေးသိပ္ပံလပတ်, 85(1), 75-88 ။CrossRefGoogle Scholar
စတန်လေ, N. , ကုန်ဖလှယ်ရေး, C တို့, Wood က, အမ်, Aghtaie, N. , လာကင်, C တို့, Lanau, အေ, et al ။ (2016) ။ လူငယ်များရဲ့ရငျးနှီးဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် sexting ။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်။ Doi:10.1177 / 0886260516633204.Google Scholar
Stein, D. , Black က, D. , Shapira, N. , & Spitzer, R. (2001) ။ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 158(10), 1590-1594 ။ Doi:10.1176 / appi.ajp.158.10.1590.CrossRefGoogle Scholar
Sümer, Z. (2014) ။ ကျား, မ, ယာနျဘာသာတရားကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်လိင်၏အငြင်းပွားဖွယ်ရှုထောင့်ဆီသို့သဘောထားတွေ။ ဘာသာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 54(6), 2033-2044 ။ Doi:10.1007/s10943-014-9831-5.CrossRefGoogle Scholar
Tjaden, PG (1988) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပညာရေး။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, 24, 208-212 ။CrossRefGoogle Scholar
Tokunaga, R. , Wright, P. , & McKinley, C. (2014) ။ အမေရိကန်လူကြီးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့။ သုံးလှိုင်း panel လေ့လာမှု။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေး, 30(6), 577-588 ။ Doi:10.1080 / 10410236.2013.875867.CrossRefGoogle Scholar
Tolman, DL, Striepe, MI, & Harmon, T. (2003) ။ ကျား၊ မရေးရာကိစ္စများ - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစံပြတည်ဆောက်ခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 40, 4-12 ။ Doi:10.1080 / 00224490309552162.CrossRefGoogle Scholar
အနောက်, ဂျေ (1999) ။ လူငယ်, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်: လိင်အကြောင်းပြောနေတာ (မ) ။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 47, 525-547 ။ Doi:10.1111 / 1467-954X.00183.CrossRefGoogle Scholar
Willoughby, ခ, ကာရိုး, ဂျေ, Busby, D. , & ဘရောင်း, C. (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကွာခြားမှုကိုစုံတွဲများအကြား - ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45(1), 145-158 ။ Doi:10.1007/s10508-015-0562-9.CrossRefGoogle Scholar
Wright, P. (2012a) ။ အမေရိကန်လူကြီးများ '' ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးက longitudinal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 24(2), 67-76 ။ Doi:10.1027 / 1864-1105 / a000063.CrossRefGoogle Scholar
Wright, P. (2012b) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း, နှင့်အမေရိကန်လူကြီးများအကြားတွင်ပေါ့ပေါ့လိင်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ, 111(1), 305-310 ။ Doi:10.2466 / 18.02.13.pr0.111.4.305-310.CrossRefGoogle Scholar
Wright, P. (2013) ။ အမေရိကန်အထီးနှင့်အညစ်ညမ်း, 1973-2010: စားသုံးမှု, ခန့်မှန်း, Correlate ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 50(1), 60-71 ။ Doi:10.1080 / 00224499.2011.628132.CrossRefGoogle Scholar
Wright, P. , & Bae, အက်စ် (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအပေါ်သဘောထားများ - အမျိုးသားရေရှည်လေ့လာမှု။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 39(4), 492-513 ။ Doi:10.1111 / hcre.12009.CrossRefGoogle Scholar
Wright, P. , Bae, အက်စ်, & Funk, အမ် (2013) ။ ဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ထိတွေ့မှု၊ သဘောထားများ၊ အပြုအမူများ၊ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 42(7), 1131-1144 ။ Doi:10.1007 / s10508-013-0116-y က.CrossRefGoogle Scholar
X ကိုခဲ့သည် Rating ။ အမေရိကန်ဥပဒေ (2008) အနောက်ရဲ့စွယ်စုံကျမ်း, ထုတ်ဝေ2။ (2008) ။ ရယူရန်ဇူလိုင်လ 22 2016 ထံမှ http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/X+Rating.
ယန်, X တို့မှာ (2015) ။ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ရှိပါသလား? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အစောပိုင်း 2000s ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45(4), 997-1009 ။ Doi:10.1007/s10508-015-0584-3.CrossRefGoogle Scholar
Zillmann, ဃ (1986) ။ ညစ်ညမ်း၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုဆိုးကျိုးများ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, Arlington, ဗာဂျီးနီးယားအပေါ်ခွဲစိတ်ဆရာအထွေထွေရဲ့အလုပ်ရုံ။ https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/NNBCKV.pdf.
Zillmann, ဃ (2000) ။ လိင်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'သဘောထားအပေါ် erotica ဖို့ထိန်းအကွပ်မရှိသော access ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်, 27(2), 41-44 ။CrossRefGoogle Scholar